सुनसरी अपडेटः शवसहित प्रर्दशन जारी, गृहमन्त्री नआएसम्म शव नउठाउने ! « News24 : Premium News Channel
सुनसरी अपडेटः शवसहित प्रर्दशन जारी, गृहमन्त्री नआएसम्म शव नउठाउने !
इनरुवा, ५ मंसिर । सुनसरीको दुहवी ९ छाताबेलीमा अपरिचित समूहले चलाएको गोली लागि स्थानीय ५० वर्षीय फिदा हुसेनको मृत्यु भएको छ ।
बिहान मर्निङवाकमा क्रममा रहेका हुसेनमाथि मोटरसाइकलमा सवार व्यत्तिले गोली प्रहार गरेको बताइएको छ । गोली हानेको आवाज पश्चात स्थानीय भेला भएका थिए । मर्निङवाकमा श्रीमतीसँगै घरबाट निस्केका हुसेनले श्रीमतीलाई केही पर पुगेपछि घर फर्किन लगाएर आफु इटाभट्टातर्फ लागेका थिए ।
जय बाबा इटा उद्योगका व्यवस्थापक रहेका हुसेन उपर उद्योग अगाडि रहेको नहरको डिलमा मोटरसाइकलमा सवार समूहले गोली हानेको थियो । गम्भीर अवस्थाका हुसेनलाई उपचारकालागि विराटनगर लैजाँदै गर्दा उनको ज्यान गएको मृतकका आफन्तले जनाएका छन् ।
शव घर ल्याएपछि हजारौंको संख्यामा स्थानीयहरु मृतकको घरमा भेला भएका थिए । जिल्ला स्थित सुरक्षा निकाय सहितको टोली र दलिय नेताहरु मृतकको घरमा भेला भएका थिए ।
मृतकका दाजु मेहदी हुसेन दुहवी वडा नम्वर ९ का अध्यक्ष हुन् । त्यसअर्थमा समेत नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको उपस्थिती छाताबेलीमा बाक्लो देखिन्थ्यो ।
शवको अनत्यस्टी लगायतको विषयमा सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीसहित सुनसरीका प्रहरी प्रमुख राजन अधिकारी लगायत मुस्लिम अगुवा सहित मृतकका आफन्तबिच वार्ता भएपनि विना निष्कर्श टुङिगदा साँझसम्म हुसेनको अनत्यस्टी हुन सकेको छैन् ।
मुस्लिम समूदाय माथिको श्रृङखलावद्ध आक्रमण नरोकिएकाले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसकिएको भन्दै स्थानीयले प्रहरी प्रशासन विरुद्ध दिनभरजसो नाराबाजी गरेका छन् । आक्रोसित भिडले इटहरी दुहवी र दुहवी इनरुवा सडक खण्डमा टायर बालेर प्रर्दशन गर्दा दिन भरजसो सो क्षेत्रमा यातायात ठप्प रहन पुग्यो ।
प्रशासनसँग भएको वार्तामा मुस्लिम अगुवासहित मृतकका आफन्तहरुले गृहमन्त्री घटनास्थलमा आउनु पर्ने, मृतकलाई शहीद घोषणा गरी क्षतिपूर्ति दिलाइनुपर्ने, हत्यारा २४ घण्टा भित्र पक्राउ गरी कार्वाही गरिनुकासाथै शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने जस्ता माग राखेका छन् ।
स्थानीयको मागका सम्वन्धमा सुनसरी प्रशासनले जिल्ला स्थित सुरक्षा संयन्त्रको बैठक डाकी लिखित रुपमा मागका विषयका प्रदेश र संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने बताएको भएपनि मृतकको परिवारसहित मुस्लिम अगुवाहरुले माग सम्बोधन नभएसम्म विस्वासको वातावरण बन्न नसक्ने भन्दै शवसहित दुहवीको डाँगा चौकमा प्रर्दशन थालेका छन् । सडकमै टेण्ट टाँगेर थालिएको प्रर्दशन माग सम्बोधन नभएसम्म जारी रहने मुस्लिम अगुवा हाजी रमजानले बताए ।
हुसेनलाई दुई गोली लागेको छ । घटनास्थलमा भने गोलीका तीनवटा खोका भेटिएको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ । घटना अनुसन्धानका क्रममा रहेकाले विस्तृत विवरण दिन नमिल्ने प्रहरीको भनाई छ । यसैबीच घटनामा संलग्नाको आशंकामा प्रहरीले इटाभट्टाका केही कामदारसहित ७ जनालाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रण लिएको छ । उनिहरुको नाम भने प्रहरीले खुलाएको छैन् ।
छाताबेलीका हुसेनको हत्यालाई केही मुस्लिम अगुवाले दुई महिनाअघि भुटाहामा भएको खुर्शिद आलमको हत्यासँग जोडेका छन् । स्थानीयहरुले केही सातायता छाताबेली लगायतको क्षेत्रमा शंकास्पद गतिविधी देखिएको बताउँदै सोबारे प्रहरी प्रशासनलाई जानकारी समेत गराइएको बताएका छन् ।
मोटरसाइकलमा आएको समूहले गोलि हानि फरार भएको घटना सिङगो मुस्लिम समूदायमाथिको आक्रमण भएको उनिहरुको बुझाई छ । हुसेन लामो सयमदेखि इटा उद्योगमा कार्यरत रहेकाले व्यक्तिगत रिसइवी र पैशाको लेनदेन विवाद समेत हत्याको कारण हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख राजन अधिकारीले घटनामा मोटरसाइकलको प्रयोग भएको र सोही मोटरसाइकलमा सवार व्यक्तिले गोली हानी भागेकाले उनिहरुको खोजी भइरहेको बताएका छन् । अपराधी समूहको खोजीकालागि नेपाल भारत सीमामा निगरानी बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ । सुनसरी प्रशासनले स्थानीयका मागका सम्बन्धमा केन्द्रीयस्तरमा पहल थालिएको जनाएको छ ।